MAALMAHA GERMAN, WOCHENTAGE, MAALMAHA GERMAN EE TODOBAADKA
Asxaabta qaaliga ahow, ku soo dhawaada casharkeenii ciwaankiisu ahaa German days, days of the week oo af jarmal ah. Casharradayada ugu horreeya ee sidan oo kale ah, waxaan ku arki doonaa maalmaha Jarmalka, bilaha dambe, xilliyada Jarmalka, iyo lambarrada Jarmalka ee casharradayada soo socda, labadaba xagga barashada erayada Jarmalka oo aan u baahnayn aqoon hore.
Mawduuca maalmaha Jarmalku waa mawduuc sahlan oo la barto lana xafido. Sida aad ogtahay, sanadkii waxaa jira 4 xilli, 12 bilood, 52 toddobaad iyo 365 maalmood. Waxaa jira 7 maalmood todobaadkii. Markay sidaas tahay Maalmaha Jarmalka Mawduuca waxaan hadda baran doonaa magaca 7da maalmood ee usbuuca.
Maalmaha Jarmalku waxay ku baxaan af Turki, higgaadintoodana Jarmal iyo sida loogu dhawaaqo ee qawska ayaa lagu bixiyay hoos.
Qoraalka Turkiga, calaamad muujinaysa in qadiyadii hore ee la akhrisan doono waqti dheer.
GERMANY DAYS, GALLAANKA MAALMAHA ISKUULKA (WOCHENTAGE)
Aynu marka hore ku aragno maalmaha Jarmalka miis, ku qor labada turki iyo Jarmal. Kadib, aan aragno ku dhawaaqida Turkiga anoo mid mid u qoraya.
Maalmaha Jarmalka iyo Turkiga
Maalmaha Jarmalka sida kor ku xusan. Markii hore Jarmal Sabti xashiishka Ereyga ayaa la adeegsaday. Laakiin hadda Saturday Ereyga ayaa loo adeegsadaa inbadan. Weli, aan ku siino macluumaad dheeri ah meel xashiishka Hadaad ereyga maqasho, laguu sheeg. xashiishka ereyga af Jarmal Saturday waxay tilmaamaysaa maalinta usbuuca. Waxay ka dhigan tahay Sabti. Laakiin hadda ugu badan Saturday Ereyga waa la isticmaalay.
Maalmaha Jarmalka iyo Akhriska Turkiga
Haatan waxan qori doonaa liiska maalmaha Jarmalka si wadajir ah ula akhriska Turkiga:
Monday, Monday (Mode: kireeyaan: g)
Tuesday, Tuesday (Di NS in: g)
Wednesday, Wednesday (Mitvoh)
Thursday, Thursday (In donırs: g)
Friday, Friday (Frayt: f)
Saturday, Saturday (Sämsta: g)
suuqa: Sunday (Zonta: g)
Maalmaha Jarmalka Mawduuca waa lala kulmi karaa wakhti kasta oo maalintii ah iyo meel kasta. Jadwalka taariikhda, marka aad iibsaneyso tikidhada duulimaadka, sameynta boos celinta hoteel kasta, iibsashada tikidhada ciyaar kasta, aadista riwaayad, iwm. Maalmaha Jarmalka maadada ayaa gabi ahaanba lagama maarmaan kuu noqon doonta. Ma sameyn kartid mid ka mid ah waxyaabahan adigoon ogeyn maalmaha Jarmalka.
Jarmal Maalmaha Sawir Sawir
Wadahadal ku saabsan Maalmaha jarmalka
Inta aad bixinaysid weedhaha, marka hore “maanta waa maantaAynu baranno weydiinta su'aasha.
Welcher Tag waa heute?
Maanta waa maalin?
Heute waa Dienstag
Maanta waa Talaado
Hene is Donnerstag
Maanta waa Khamiis
Asalkii la odhan ah Mittwoch
Maanta waa Arbaco
Heute waa Freitag
Maanta waa Jimce
Heesta waa Montag
Maanta waa Isniin
Xukunno kala duwan oo Jarmal ah
Hadda "waa maalin berriAynu baarno su'aasha "iyo jawaabaha laga bixin karo su'aashan:
Berri waa maalin?
Morgen waa Samstag
Berri waa Sabti
Morgen waa Sonntag
Berri waa Axad
Morgen waa Freitag
Berri waa Jimce
berri waa Isniinta
Morgen waa Mittwoch
Berri waa Arbaco
Saaxiibbada qaaliga ahow, sida ka muuqata jumladaha tusaalaha ah ee kore "heuteEreyga "af Turki"maanta"Macnaheedu,"MorgenEreyga ""berriWaxay ka dhigan tahay ”. Dhanka kale, macluumaad yar oo dheeraad ah: haddii Morgen Haddii xarafka ugu horreeya ee erayga lagu qoro waxyar "berriWaxaa loola jeedaa "laakiin Morgen bilowga ereyga sida lagu arkay halkan (Morgen) marka xarfaha xarfaha waaweyn la xarfo "subaxWaxay ka dhigan tahay ”. Aynu sidoo kale siinno macluumaadkan yar.
Hadda aan ku sii wadno jumladaha muunadkeenna ku saabsan maalmihii Jarmalka.
Eine Woche Hat 7 Tage: Waxaa jira todobaadyo 7 ah toddobaadkii.
Dagaalka qallafsan Montag: Maalintii ka horraysay maalintii ayaa ahayd Isniintii.
Dagaalka Gestern Dienstag: Waxay ahayd Talaadadii.
Heute ist Mittwoch: Maanta waa Arbaco.
Morgen ist Donnerstag: Berri waa khamiista.
Übermorgen ist Freitag: Jimce ka dib berrito.
Aan soo qaadano tusaalooyin dheeri ah:
Heesta waa Montag. : Maanta waa Isniin.
Heute waa Dienstag. : Maanta waa Talaado.
Asalkii la odhan ah Mittwoch. : Maanta waa Arbaco.
Hene is Donnerstag. : Maanta waa Khamiis.
Heute waa Freitag. : Maanta waa Jimce.
Jumlado Maalmo Jarmal ah
Khudbada Jarmalka: shalay, maanta, berrito
Heute ist Montag: Maanta waa isniinta
Heute ist Dienstag: Maanta waa Talaado
Height ist Donnerstag: Maanta waa khamiista
Dagaalka Gestern Montag: Shalay ayaa ahayd Isniintii
Dagaalka Gestern Mittwoch: Maalintii Arbacadii
Dagaalka Gestern Freitag: Shalay ayaa ahayd Jimce
Morgen ist Montag: Berito waa isniinta
Morgen ist Freitag: Berito Jimcaha
Morgen ist Samstag: Berito waa sabtida
Waxaad mawduuca ku akhrisataa jarmal, peki Jarmalka iyo xilliyada Jarmalka Ma aqriday muxaadaradeenii? Kadib markaad aqriso sharraxaadda bilaha iyo xilliyada Jarmalka ee Jarmalka, waxaad baran doontaa maalmaha Jarmalka, bilaha iyo xilliyada.
Mawduuca Imtixaanka Jarmalka
Waxaan kugula talineynaa inaad si dhakhso ah u xalliso imtixaanka mawduuca Maalmaha Jarmalka, kaas oo aan diyaarin doono wakhti yar. Casharrada maalmaha Jarmalka waxaa badanaa la tusa ardayda fasalka sagaalaad. Ardayda aan qaadan casharada Jarmalka ee fasalka 9aad waxa lagu bari karaa maadada maalmaha jarmalka fasalka 10aad.
Waad ku qori kartaa su'aalo iyo faallooyin ku saabsan casharadeenna jarmalka baraha almancax. Su'aalahaaga oo dhan waxaa ka jawaabi doona macallimiinta almancax.
Dilersen hadda laga helay boggayaga nambarka nambarka Waxaad kaloo akhrin kartaa casharka Jarmalka.
# GERMANY DAYS, GALLAANKA MAALMAHA ISKUULKA (WOCHENTAGE)
# Maalmaha Jarmalka iyo Turkiga
# Maalmaha Jarmalka iyo Akhriska Turkiga
# Jarmal Maalmaha Sawir Sawir
# Wadahadal ku saabsan Maalmaha jarmalka
# Xukunno kala duwan oo Jarmal ah
# Mawduuca Imtixaanka Jarmalka
Tags: 10. maalmaha nasiibka fasalka, 10. fasalka nasiibka mawduuca, 9. fasalka nasiibka mawduuca nasiibka, 9. fasalka nasiibka mawduuca, maalmaha nasiibka, mawduuca luuqada ingiriiska, maalmaha usbuuca asbuuca